'UManana akaboshwanga ngoba ubengeyena umuntu ozobaleka' - Mbalula | Isolezwe
'UManana akaboshwanga ngoba ubengeyena umuntu ozobaleka' - Mbalula
Izindaba / 10 August 2017, 4:37pm / MHLENGI SHANGASE
UNgqongqoshe wezamaPhoyisa uMnuz Fikile Mbalula uthi akaboshwanga ngoba wayengeke abaleke uMnuz Mduduzi Manana osolwa ngelokushaya.
NJENGOBA kunesikhalo ngokusebenza komthetho namaphoyisa ngemuva kokuphela kwezinsuku ezintathu iPhini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme uMnuz Mduduzi Manana engaboshiwe ngecala asolwa ngalo, uNgqongqoshe wezamaPhoyisa uMnuz Fikile Mbalula uthi akaboshwanga ngoba wayengeke abaleke.
UManana udedelwe ngebheyili ka-R5 000 yinkantolo iRandburg eGoli izolo kanti uzobuyela enkantolo ngoSepthemba 13, ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza abesifazane ababili endaweni yobumnandi eGoli ngeSonto ezintatha.
UManana, udedelwe ngebheyili yize ebengakaze aboshwe njengoba eye enkantolo ngoLwesine ehamba nommeli wakhe.
Ufike kule nkantolo egqoke isudi enavy, ishethi elimhlophe nezicathulo ezi-brown.
Umshushisi uYusuf Baba, ucele iMantshi uLiesel Davids ukuthi abezindaba bavunyelwe ukuthi bashuthe uManana kodwa ummeli kaManana uMnuz Michael Motsoeneng Bill wasiphikisa lesi sicelo esigcine sichithiwe.
iPhini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme uMnuz Mduduzi Manana obhekene necala lokushaya ngenhloso yokulimaza abesifazane ababili
Kunesikhalo ngokuthi umthetho ukhetha iphela emasini njengoba abantu abadumile bengaboshwa.
"Ubengeyena umuntu ozobaleka. Uyaziwa lapho ehlala khona, futhi ubengeke aphumele ngaphandle kwezwe. Ngesikhathi ngithola umbiko wokuthi ushaye abesifazane ngamfonela ngambuza ngaso, wathi akuyena kodwa abehamba nabo abenza lokhu. Ngigcine lapho ukukhuluma naye. Umthetho kumele uthathe indawo yayo kuyena, akabhekane necala alenzile," kusho uMbalula esithangamini sabezindaba izolo eKapa.
Uthe uManana ubengeke abaleleke abezomthetho.
"Uyasebenzisana nabezomthetho selokhu kwenzeka lesi sehlakalo. Besingajahile ukumbopha ngoba besifuna ukuphenya kahle sizenelise. Besingafuni kube nengcindezi emaphoyiseni bese uthola ukuthi useyaphuma ngoba kuxhanyazeliwe. Yingakho sithathe isikhathi siphenya lolu daba hhayi ngoba engaphezulu komthetho, akekho umuntu ongaphezu komthetho kuleli," kugcizelela uMbalula.
Uthe umsebenzi kahulumeni ukuvikela izisulu zodlame, izingane kanye nabadala.
"Sizozibopha zonke izinja ezihlukumeza abesifazane. Selokhu ngingenile kunabesifazane acishe ababalelwa ku-5 000 abebekhala ngokuthi bavula amacala sekuphele iminyaka kodwa abantu ababahlukumezayo ababoshiwe. Ngingenelelile bagcina beboshiwe, abanye babo banqatshelwe nebheyili," kusho uMbalula.
Kube nesikhalo ngokuthi uManana unyenyile efika kule nkantolo izolo wangena ngentuba yabasebenzi njengoba izintatheli bezimcuthele.
UMbalula uthe okubalulekile ngukuthi uvelile enkantolo ngecala abhekene nalo wathi uma engamiswa emsebenzini bazohoxiswa onogada baManana.
Okhulumela iPAC, uMnuz Kenneth Mokgatlhe, uthe kucacile ukuthi abanemali nosopolitki bangahlukumeza abesifazane kungabi ndaba zalutho.
Uthe badumele ngebheyili enikwe uManana ngoba bekumele agcinwe esitoksini.
"Abomthetho abafundi ngoba kudedelwe umuntu ohlukumeza abesifazane. Aseneme ngoba nase-Ermelo uke wabhekana necala elifanayo."
UMnuz Matokgo Makutoane weSoul City Institute for Social Justice, uthe bazoliqapha ngelokhozi leli cala ngoba amacala afuze lawa ajwayele ukungaphumi nezigwebo ezinzima.
Uthe ukuxolisa kukaManana akusho lutho ngoba kumele aqhubeke abhekane nengalo yomthetho.